65000 ကျွမ်းကျင်သောဧည့်သည်များသည်ပြပွဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်, ဤအထည်အလိပ်ယန္တရားပူးတွဲပြပွဲ၏အတွေ့အကြုံတန်ဖိုးသည်မြင့်မားခဲ့သည် - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
65000 ကျွမ်းကျင်သောဧည့်သည်များသည်ပြပွဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်, ဤအထည်အလိပ်ယန္တရားပူးတွဲပြပွဲ၏အတွေ့အကြုံတန်ဖိုးသည်မြင့်မားခဲ့သည်
အချိန်: 2021-07-02 hits:
အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများပူးပေါင်းပြပွဲ, အထည်အလိပ်စက်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် 12 နှစ်ပေါင်း, ကပ်ရောဂါခေတ်တွင်စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူရန်အရေးကြီးသောအခိုက်အတန့်နှင့် ၁၄ နှစ်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏အဖွင့်နှစ်ကိုဆွတ်ခူးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။, စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အများစုအတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်မှုရှိသောပွဲတော်တစ်ခုကိုရည်စူးထားသည်. ငါးရက်တာပြပွဲကာလအတွင်း, အထည်အလိပ်ယန္တရားပူးပေါင်းပြပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့သည် 65000 ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှကျွမ်းကျင်ဧည့်သည်များ. စက်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည် ဦး မော့လာချိန်တွင်, စက်မှုလုပ်ငန်းအရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်မောင်းကိုသေနတ်ဖြင့်ထိုးပါ.
ကပ်ရောဂါပြီးနောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချည်မျှင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ၏ပထမဆုံး Off-line နိုင်ငံတကာပြပွဲ, ဤအထည်အလိပ်ပြပွဲသည်အထည်အလိပ်လုပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မျှော်မှန်းချက်ကိုသယ်ဆောင်သည်. ထိုကွောငျ့, ပြပွဲစီစဉ်သူများသည်လုံခြုံရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပြင်ဆင်မှုကိုထိပ်တန်း ဦး စားပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်. ပါဝင်မှုနှင့်ကြည့်ရှုမှုအားလုံးချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်မှုရရှိစေရန်ကဏ္ aspects အသီးသီးမှအသေးစိတ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ, ပြခန်းများနှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကိုထိထိရောက်ရောက်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီသည်.
ပြပွဲမတိုင်မီ, တရားဝင် website ကိုဖွင့်ပါ + wechat တွင် double entry ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပါ, ပြသသူ၏ဧည့်သည်ဖိတ်ကြားမှုစနစ်ကိုထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ပါ, ပြပွဲကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ကြားရန်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုကလစ်တစ်ချက် နှိပ်၍ ဖိတ်စာကိုရှေ့ဆက်ရန်ပြသူအားလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်. ငါးရက်တာပြပွဲကာလအတွင်း, ၀ ယ်သူဖိတ်ခေါ်မှုစနစ်ကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်, ပြခန်းများနှင့်မည်သည့်အချိန်မဆိုဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်. ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားသောပရိသတ်သည် site ၌ ၀ င်နိုင်သည်, ရင်ဘတ်ကဒ်ရယူရန်သော့တစ်ချောင်းဖြင့်ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ပါ, အဆက်အသွယ်မဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချိန်နှင့်အားထုတ်မှုကိုသက်သာစေသည်, လုံခြုံပြီးစိတ်ချရသည်.
မဏ္ionsပ်တွေကိုအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲထားတယ်, အလံချိတ်ဆွဲခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်. ပြခန်းများနှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများသည်သက်ဆိုင်ရာပြခန်းကိုရှာရန်လမ်းညွှန်ချက်ကိုအမြန်လိုက်နိုင်သည်. ပြတိုက်တစ်ခုစီ၏သတင်းအချက်အလက်ရုံးသည်ဧည့်လမ်းညွှန်များနှင့်အခြားလမ်းညွှန်ပစ္စည်းများပေးသည်, ပြပွဲကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုရင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ပြသနာမျိုးစုံကိုအဖြေရှာပါ.
ပရိသတ်နှင့်ပြခန်းဖွင့်သူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်, စီစဉ်သူသည်သတင်းအချက်အလက်ရုံးတစ်ခုစီ၌ကပ်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများထားပေးသည်, သို့ဖြစ်၍ လိုအပ်နေသောပရိသတ်နှင့်ပြသသူများသည်၎င်းတို့ကိုအချိန်မရွေးရယူနိုင်သည်. ပြပွဲခန်းမအပြင်ဘက်ဆင်းသက်ရာနေရာတွင်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုရှိသည်, ပြပွဲနှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်ပြပွဲခန်းမမှထွက်ခွာရန်အဆင်ပြေသည်, မီးရထားဘူတာ, နေ့စဉ်လေဆိပ်နှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနေရာများ. အသင်းအဖွဲ့ရွာ, စစ်ဆင်ရေးစင်တာ, ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရုံး, သတင်းစင်တာ, အိမ်နည်းပညာရုံး, ၀ န်ဆောင်မှုရုံးနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများသည်ပြခန်းများနှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်အချိန်မရွေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
ရွက်လွှင့ ်၍ လေနှင့်လှိုင်းများကိုစီးပါ!
တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထည်အလိပ်ပြပွဲ 2020 ITMA Asia ပြပွဲသည်အောင်မြင်စွာနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်,
နိုဝင်ဘာလမှာပြန်ဆုံကြရအောင် 20-24, 2022!
နောက်တစ်ခု : ဆိုးလ် Love